Sida loo abuuro Muqaal Aperture ah iyo Guba si DVD la iDVD
> Resource > DVD > Sida loo abuuro Muqaal Aperture ah iyo Guba si DVD
Aragtidayda, Aperture waa version xooggan ee iPhoto. Iyadoo dambe ogol yahay oo keliya in aad sameysato slideshow guji-ka-ciyaar, Aperture ka dhigayaa suurto gal ah inay wax badan ka astaysto slideshow ah oo khibrad leh. Bal aan bilaabaan in ay sameeyaan slideshow la Aperture iyo gubi in DVD la iDVD. Aalada ee Aperture DVD slideshow waa Aperture Muqaal dhoofinta Tayada Video High iDVD Import Guba Aperture in DVD.
Bilow Muqaal Aperture ah
Waa mid aad u fudud in la abuuro slideshow ah ee Aperture. Qaadashada Aperture 3 tusaale ahaan, u tag oo kaliya iyada oo File > New > Muqaal inuu ku soo bilowdo slideshow madhan, ama doorato sawirada Browser hore in ay curiyaan slideshow ka images sleeted. Laakiinse adiga waa lagu soo jeediyay in la sameeyo qaar ka mid ah goobaha default ka hor inta slideshow abuurista iyo soo degida sawirada. Waxaa ka mid ah goobaha kuwaas, muuqa, muddo slide, Dalagyada iyo guurka waa isbedel badan tahay in loo baahan yahay. Markaas, guji Import button in la furo browser ah in ay soo dhoofsadaan sawirada, iyo sidoo kale video iyo files audio.
Next, waqti badan waxaa looga baahan karaa inay astaysto aad slideshow Aperture. Iyadoo Aperture, aad geliso yaabaa slide ah (ugu horeysay oo gacanta sort hoos aragtida Browser dari), astaysto hawlgeli Ken-gubasho, darto qoraalada, iyo in ka badan. Ku celceli aad slideshow Aperture ilaa ay san yahay. Software Apple ee had iyo jeer waa maydhan biyaha fududahay in la isticmaalo iyo natiijada kaamil ah yaboohay.
Fiiro gaar ah : Ka hor inta slideshow Aperture ah, waxaad u baahan tahay Aperture 3 ka App Mac ka Store hesho $79.99. Baro wax badan oo ku saabsan Apple.com >>
Dhoofinta ugu horeysay ka hor inta la iDVD gubanaya
Si aad u gubi slideshow Aperture in DVD, waxaad u baahan tahay dhoofin slideshow in ay Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah) hore. Tan iyo slideshow la encoded doonaa si ku haboon heerka DVD hortiisa DVD gubanaya, waxa lagugula talinayaa in ay doortaan goobaha sare ku filan oo tayo leh dhoofinta, tusaale ahaan, 720p HD. The sare, markii in ka badan waxaa looga baahan yahay inay u dhoofiyaan slideshow Aperture . Laakiin ma waxaad ka heli doontaa HD video la iDVD sababtoo ah tayada video muuqata hoos lahaa ka dib markii lagu gubay gal DVD. Sidaas dib u qabsato video tayo sare leh, si ay u dhoofiyaan HD waa mid aad loo baahdo.
Alternative si Aperture, jaban
Wondershare Fantashow waxay sahlaysaa in la abuuro slideshow multimedia la sawiro, videos, iyo music adigoo isticmaalaya dhisay-in mawduucyada slideshow oo si sharci darro ah ku daray laga yaabaa in slideshow hal. Ka sokow dhoofinta si Mac HD, maktabadda Lugood, iPhone, iPod, iPad, iwm, Fantashow sidoo kale muuqan la iDVD shaqeeyaa inay u beddesho aad slideshow in DVD loogu daawashada TV-ga. Waxaa Hel u $49.99 oo kaliya.
Sida loo geliyaan duubey in YouTube si fudud oo dhaqso
Sida loo sameeyo cirib Muqaal ah oo Embed in Website
Sida loo sameeyo a iMovie Photo Muqaal la Music
Easy DVD gubi bilowga ah
Sida loo Guba Podcast in DVD
RealPlayer DVD gubi: Sida loo Guba RealPlayer Faylal ay si DVD
ConvertXtoDVD u Mac? Beddelaan wax DVD ee Mac
Sida loo isticmaalo DVD idiinkala hadhin ee Windows